haku is back 94 days ago
pepesilva 94 days ago
pepesilva 93 days ago
Visitor from US is reading Divorce!!!
Visitor from DE is reading Khasi around Dallas Area
Visitor from DE is reading Yo Jeevan Ma by Unwritten Karma
Visitor from DE is reading anyone from DC/VA/MD ?
Visitor from US is reading Mashangalli MoMo at Gaushala
[VIEWED 2472 TIMES]
Posted on 10-15-21 5:16 PM Reply [Subscribe]
म्यमकासुली, मितिले थाहा छैन तिथिले ठ्याक्कै ९ भयो सेक्स नगरेको । मैले २०७० सालको बिजया दशमीको दिन अन्तिम चोटी सेक्स गरेको थियो , पत्त्याउनु हुन्छ ? मेरो जीवन कथा त सबै साझाबासि लाई थाहा छदै छ तै पनि म छोटकरीमा भन्छु । टीन एजमा मेरो घराँ बालमा बस्नेको छोरि संग लाभ पर्यो, ट्यो मुर्दा घराँ कैले नबस्ने तेही मौका छोपेर मैले उसको छोरि पट्यायो अनि एक दिन उसको वेडरुमाँ सारीरिक सम्पर्क गर्ने क्रमाँ मलाई टेस्ले रंगेहात समात्यो। ट्यो असत्ति पुलिस रैछ अनि मलाई पावर लगाएर जेल हाल्यो अनि मेरो ब्रेक-अप भयो र म अम्रिका आउने वाताबरण तयार भयो ।
म अम्रिका आउनु भन्डा पहिले मेरो एउटा महिला संग सेक्स भयो र ट्यो नै मेरो ऐले सम्मको अन्तिम सेक्स हुन पुग्यो । ट्यो खेनी गर्लफ्रेन्ड संग ब्रेक अप भए पछि मलाई सधै सेक्सको तल तल लागि रह्यो, सधै उनि संग बिताएका पलहरु मन मस्तिकमा घुमी राख्ने । तेस्को बाउको डरले मैले ट्यो संग फेरी भेट्ने आँट गरेन । यसै क्रममा ठैब गोवादारीको एउटा ज्यापुनी संग मेरो FB मा चीन जान भयो, टेस्को बुड़ो पनि विदेशमै रैछ । उमेरले म भन्दा दस वर्ष जेठी भए पनि ज्यान ज्यादै तगडा । तेस्लाई पनि लोग्नेले छोडेर विदेश गएको ५ ६ वर्ष भै सकेछ । हामी बीच कुरा मिल्यो र FB बाटै video chat गरेर सबै कुरा हुन थाल्यो ।
ट्यो ज्यपुनी ठैबको म हर्सिद्धिको, हाम्रो दूरी मुस्किलले आदा घण्टाको होला। एकदिन टेस्ले मलाई घराँ बोलायो ,जाने ट जाने अब कसोरी जाने ? टेस्को टोलको धेरै मान्छेले मलाई चिन्छ ,फेरी आइमाई मात्र भएको घराँ गयो भने पिटाई खाला भन्ने आपट। एक्दीन मैले जुक्ति निकाल्यो , दशैंको टिकाको दिन भेट्ने सल्ला गर्यो हामीले । ट्यो दिन सबै मान्छे आफ्नो आफ्नो नखट्या ( नेवारी दसैँ भोज) मा ब्यस्त हुन्छ तेही दिन हामी रासलीला गर्ने भनेर सल्ला गर्यो । ज्यपुनीलाइ पनि नुवई धुवाई गैर सफा भएर बस्न भन्यो मैले ।
छिमाबू, कंडम सक्की राको रैछ तेही दिन,आफु लाई कन्डम किन्न भने पछि मरे टुल्ये लाज लगेर ल्याऊछ, तर किन्न ट पर्यो । अनि मैले हात्तीबनको औसदी पसलाँ गएर ( जहाँ कसैले चिन्दैन ) कन्डम किन्न खोज्यो । छिमाबू किन्ने आट नै आएन, अनि मैले ५ प्याकेट सिटामोल, सन्चो, हाजमोला ,जीवनजल आदि आदि संगै कन्डम किन्यो । ५ रुपियाको कन्डम किन्न १५ सय खर्च गरेर म ज्यपुनीको घराँ पुग्यो ।
ज्यपुनी नुहाएर, कपालाँ बासना आउने तेल लाएर क्रिम पाउडर घसेर तयार भएर बसेके रैछे। म मूजि प्यासी भनेको ट्यो झन् ५ वर्ष देखि खारिएर बसेकी रैछ । म्याक्सी भित्र कट्टु पनि खोलेर बसेकी रैछे । पैले चोटी भेट भएको, चिना पर्ती पनि नगरी मलाई झ्याप्प अंगालो हालेर ओठ टोक्न थाली । १ मिनेट मेरो ओठ चुसेर जाठीले मेरो हात टेस्को सुसू गर्ने ठाउँ तिर लगेर मुसार्न थाली ,टेस्को बाक्लो झ्याउले मेरो हाटमा गुडी गुडी हुन थाल्यो अनि मेरो माल नि १ सेकेन्ड मा ० -१८० भयो ।
खरिएको बोका म फोर-प्ले नै नगरी ज्यपुनी लाई बोकेर टेस्को ओछ्यानमा सुतायो, पाकेको भोगोटे जत्रो टेस्को बुबु मेरो हाटले मार्न थाल्यो , हेर्दा खदिलो भए पनि टेस्को बूबु ज्यादै गिलो थियो , बच्चाकि आमाको दुध माड्न रत्तिभर मज्जा नाउने निस्कर्स निकालेर मैले आफ्नो हाट टेस्को सुसू गर्ने ठाउँमा लगेर मुसार्न थाल्यो । मैले मुसारे पछि टेस्को प्वाल ट झन झन् खुल्दै आयो अलि अलि ओसिलो हुदै गयो ।
छिमाबु टेस्को प्वाल बाट ट मेरो ४ ओटा औला सहित पुरै हाट नै पस्ला जस्तो गर्यो। ज्यपुनी चरमउतेजेनामा आएर मेरो पीपी समातेर टेस्को प्वालमा पसाउन सुरु गरि तर मेरो पौने ३ इन्चको ढुकुर टेस्को बिसाल योनिको छेउ नपुग्दै हरायो । म्यमकासुली येति खुकुलो भयोकि गिलास मा चम्चा राखेर चिनी घोले जस्तो भयो । घस्रणको ट के कुरा गर्नु मेरो धुक्कुर ट कता बिलायो कता टर्च बालेर खोज्नु पर्ने आवस्था आयो । घ्रस्रण नभए पछि पानी झर्ने कुरै आएन, लगेको कन्डमको नि कुनै काम भएन । उसै ट आफ्नो ढुक्कुर सानो तेइ माथि बच्चा भए पछि आइमाईको माथि र तल दुवै फत्रक्क हुने रैछ, रड्डी, कवाडी कामै नलाग्ने । बच्चा भएकि आइमाईको अनुहार जति राम्रो भने पनी, फिगर जति बनाए पनी भित्रि माल चै धमिराले खाई सकेको हुने रैछ ।
आफ्नो सानो ढुक्कुर लाई दोष दिउ भने गर्ल फ्रेन्ड संग गर्दा दुवै लाइ भरपुर मज्जा आउथ्यो, औला छिरुदा मुस्किलले २ ओटा पनी राम्रो संग नपस्ने , माथि उस्तै खदिलो । ट्यो दिन म सारै निरस भएर घर फर्कियो, रुट १४ को गोदावरी लगनखेलको माइक्रो बसको झरुवारासी देखि हरिसिद्धि सम्मको १५ मिनेट को यात्रा एक जुग जस्तो लाग्यो। माइक्रोमा बजेको " के सोचे मैले, के भयो ऐले " बोलको गीतले आफैलाई जिस्क्याए झैँ लाग्यो ।
ट्यो दिन देखि मैले बच्चा पाई सकेकि आइमाई र अर्काकी बुडी लाइ नछुने बाचा गरेको ऐले सम्म कुवारा नै छ , सबै काम हातैले गर्छ, बंगलामुखी माताको मन्दिरमा चडाको बोका पनी मेरो नजिक आयो भने नाक थुन्छ होला , तनाब छ , यता TPS को टेन्सन अर्कै छ ।
Posted on 10-18-21 11:04 AM [Snapshot: 448] Reply [Subscribe]
बिर्येको बाँध फुट्ला जस्तो भएर मैले २०७० साल बाद एकै चोटी २०७४ साल मंगसिर ५ जाते हस्तमैथुन गरे, लिङ्गलाइ हातले खेलाको लगभग २० सेकेन्डमै ठुलो गडगडाहटका साथ मेरो लिङ्गबाट मैन बत्तिको टुक्रा जस्तो अर्ध लेधो चामलको चौलानी जस्तो पदार्थ ज्वालामुखी बिस्फोटन पछि आउने बाक्लो लेधो सरि प्रबाह भयो । माटोक्ने जाडोमा मुस्तांग तिर पाइप भित्रै पानि जमेर बरफको टुक्रा बनेको देखेको थिए तर लिङ्ग भित्र तेसरी बिर्ये जमेर मैन बत्तिको टुक्रा बनेको चै आफैले अनुभब गरे ,मूजि रिगंटा लाग्ला जस्तो भयो आफ्नै बिर्ये देखेर । करिब २ ३ सेकेन्ड बाद मैन बत्तिको टुक्रा जस्तो बिर्ये आउन बन्द भयो र तत्तपश्चात् पानीको पिच्कारी सरि बिर्येको लेदो निस्कासन भयो । बुलेट गतिको बिर्ये बाथरुमको ऐनामा गएर ठोकियो र ऐना चर्कियो। योमाया, ४ वर्ष बाद आफ्नो बिर्येको रफ्तार देखेर आफै बेहोस भएर ढलेछु ।केहि बेर पछि होस् खुल्दा आफुलाई बाथरूमको भुइँमा ढलेको पाए, बिर्येको फोहोराले चर्किएको ऐना,सरिर यत्र-त्रत्र छरियको बिर्येको महासागरमा लत्पतिएको आफुलाई बिस्तारै सम्हालेर उठाए अनि हत्तनपत्त आफ्नो माल हेरे, धन्न सहि सलामत रैछ । मलाई त मूजि बिर्ये संगै लिङ्ग नि उड्यो जस्तो लागेको थियो । भगवान लिंगेशोर महादेवको परकम्पाले लिङ्ग सहि सलामत रैछ । महादेवलाइ एक चोटी ढोगेर बाथरुम सफा गर्न तिर लागे तत्पश्चात हप्तामा एकपटक हस्तमैथुन गर्दो भए।।।
Last edited: 18-Oct-21 11:07 AM
Posted on 10-18-21 11:34 AM [Snapshot: 487] Reply [Subscribe]
म मेक्सिको हुँडै तेक्सास छिर्नु अघि एक त्याम मलेसियामा काम गरेर ल्याउँठ्यो, टेटी बेलामा मेरो बुढिको यौता मरन्च्याँसे डेढ इन्चको ढुक्कुरवाला सँग लस्पस भैराको छ भनेर मेरो छिमेकि बाउन्ले भन्ठ्यो।टेटी बेला काँठे बाउनले मेरो माईन्ड फक गर्न भनेर ल्यायो होला भन्ठानेर मैले केई गरेन, साँच्चीपो रैछ बा । बेकारमा बाउन बाजेलाई सरापेर ल्याएछ मैले ट । माफ गरिडिनु होला भग्वान किस्न जि, हजुरको भक्टलाई मैले नानाठारी भनेर ल्यायो।
एनिवे, टँ हाकुचा आज डेखि मेरो मोर्तल एनिमि भैस, टँलाई मैले भेत्यो भने टेरो छाला कातेर कत्तु बनाएर लाउँछ म !
Posted on 10-18-21 1:05 PM [Snapshot: 548] Reply [Subscribe]
Haku khwasaa Ko kasto toori hola3sec pachi birya jharnai chodyo re.. bichara…
Posted on 10-18-21 4:18 PM [Snapshot: 659] Reply [Subscribe]
ख्वासा सनाक्लाल, पीपीसिल्वा, लोगनचा आदि नाम गरेका एकै व्यक्ति मेरो बिरुद्ध लागि परेका छन . तर मुजी स्यालको झुण्डले सिहको सिकार गर्न सक्दैन , बुझिराख.
Posted on 10-19-21 2:52 AM [Snapshot: 882] Reply [Subscribe]
टँलाई लाज लागेर ल्याएन म जस्टो ज्यापुचालाई ट्यो लोगनचा जस्टो तपरे बाउन सँग कम्पेर गर्न ? टेरो मुख्मा किरा परि जावोस लु जा !